ငါ့ Blogging Checklist ... | Martech Zone
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Huntington ဘဏ်ရှိ VP Brandon McGee နှင့်ကော်ဖီသောက်ခဲ့သည် မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း။ Brandon ၏ဘလော့ဂ်တွင်သူ၏ရှာဖွေမှုအင်ဂျင်အဆင့်တွင်ကောင်းမွန်သည် - သူ၏စုစည်းထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်သူရေးသားသောဘလော့ဂ်များ၏တင်းကျပ်သောနယ်ပယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကသူ့ဘလော့ဂ်အကြောင်း chatted လုပ်ခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းကိုတောင်ခဏလေးစကားပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဘယ်သွားနေတယ်၊ ​​တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်ထိုးထွင်းသိမြင်စေတယ်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဆိုမှု၏အနှစ်ချုပ် - ငါကလူတိုင်းနှင့်မျှဝေချင်သည်။
နယ်ပယ်, နယ်ပယ်, နယ်ပယ်... မိုက်ခရို, မိုက်ခရို, မိုက်ခရို။ ဘလော့ဂ်လုပ်ဖို့ Brandon ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်မနာလိုပါ။ ငါအမြဲတမ်းပိုက်ကွန်ကိုချပြီးငါးတွေပိုရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားအတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့မှာသိပ်ကိုတင်းကျပ်တဲ့နယ်ပယ်မရှိဘူး၊ ငါကတခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအများကြီးနဲ့ယှဉ်ပြိုင်တယ်။ Brandon ကပြိုင်ဆိုင်စရာမလိုပါဘူး။ မင်းဘလော့ဂ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာဆူညံသံတွေများလာတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြိမ်နှုန်းကိုရှာပါ။
ဒိုမိန်းအမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း။ Brandon သည် Blogger ဖြင့်လက်ရှိတည်ရှိသည်။ ဤနေရာသည် 'သေး' ကိုကျွန်ုပ်၏ယခင်အချက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းအကြောင်းဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ကြီးစွာသောဒိုမိန်းအမည်ကိုရိုက်ထည့်မိပါကအခြားသူများသည်ပစ်မှတ်ထားသောဒိုမိန်းအမည်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ Brandon ကို Search Engine ၏ရလဒ်စာမျက်နှာကိုနှိမ့်ချနိုင်သည်။
Hosting vs. Hosted။ Blogger မှ Brandon ၏ရွေးချယ်မှုသည်သူ့ကိုထ။ ပြေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူကသူ့နယ်ပယ်ကိုရပြီနှင့်သူတသမတ်တည်းကြီးစွာသောဘာသာရပ်များအပေါ် blogging ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်သည်အနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သူကသူ့ကိုပြုစုပျိုးထောင်သည်ဟုမထင်ပါ အများကြီးအဖြစ် သူကသူ့ကိုယ်သူအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပကြလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အာရုံစူးစိုက်မှုကို။ WordPress ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်းက၎င်းအားမိမိ၏ layout ကိုအဓိကထားရန်၊ အသေးစိတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပရိသတ်အားသူ၏ဘလော့ဂ်ဂါ၏အာရုံပျံ့လွင့်စရာများအစားသူတို့ကိုယ်ပိုင်“ ကိုယ်ပိုင်” လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာငါ Brandon ကိုပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခု၊ သူရဲ့ content တွေကိုaထဲမှာဘယ်လိုပြသလဲဆိုတာပါ SERP။ ဂူဂဲလ်တွင်သူ၏ရေးသားချက်များနှင့်လင့်များကိုမည်သို့ရည်ညွှန်းပြီးမည်သို့ပြသသည်ကိုသင်ကြည့်လျှင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသည်။
ပို့စ်ဖော်ပြချက်အားလုံးသတိထားမိ? သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလား WordPress တွင်၊ ကဲ့သို့ပလပ်အင်တစ်ခု အားလုံးတစ်ဦးက SEO ဆိုသည်မှာ Pack ကိုအတွက် ဂူဂဲလ်ရှိသင်၏လင့်ခ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသောကောက်နှုတ်ချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆိုဒ်သို့ကလစ်နှိပ်ခြင်းများပိုမိုများပြားလာရန်ပစ်မှတ်ထားသော၊ သော့ချက်ကျသောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာအချို့ကိုရေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
SEO ဆိုသည်မှာမည်သည့်ဂုရုမဆိုကျွန်ုပ်မကြေငြာသော်လည်း၊ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွင်း၌ဖော်ပြသောအကြောင်းအရာကိုပြုပြင်နိုင်စွမ်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသောရှေး ဦး လူကြီးများအတွက်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။
အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းတို့သည်အလားတူလိုက်နာမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ပြောင်းလဲနေပုံရသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Brandon ၏ဘလော့ဂ်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။ သူကငါ့ကိုကြီးမားတဲ့မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များကိုငါ့ကိုထောက်ပြခဲ့သည်။
Tags: blog အကြောင်းအရာများBrandon McGeeအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများdomain name ကိုHosted နှိုင်းယှဉ် hostingHuntington ဘဏ်မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်serp
မတ်လ 10, 2008 မှာ 3: 50 pm တွင်
ငါသဘောတူလက်ခံသည်နေစဉ်, ဘလော့ဂ်တစ်ခုစတင်၏ရှုထောင့်ကနေငါကနည်းနည်းအန္တာရာယ်ထင်, သွားကြဖို့လမ်းဖြစ်၏
ငါသည်ငါ့ပိုက်ကွန်ကိုအနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်ချပစ်ရန်ပိုမိုရှိုပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ငါ့ဘလော့ဂ်တိုးတက်သည်နှင့်ငါ့ကျက်ထုတ်ထွင်းအဖြစ်ကချကျဉ်းမြောင်းလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှုအတွက်ပိုမိုလုံခြုံသောလမ်းကြောင်းအဖြစ်
မတ်လ 10, 2008 မှာ 4: 43 pm တွင်
ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလော့ (၄) ခုမှ (၆) ခုရှိမယ်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီပါတဲ့တစ်ခု။ လူတွေဟာ feeds တွေအတွက်သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စျေးဝယ်နည်းအတိုင်းစျေးဝယ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာရောနှောတဲ့အိတ်ကိုမဖမ်းဘူး၊ သူတို့လိုချင်တဲ့အိတ်ကိုယူတယ်။ 🙂
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာများအားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ရန်အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ ကျယ်ပြန့်သောပိုက်ကွန်ဖြင့်သွားခြင်းနှင့်အတူပြisနာမှာသင်သည်ထိုတွင်ရှိနှင့်ပြီးသားနယ်ပယ်အားလုံးကိုဆန့်ကျင်စွာလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှတတဲ့အခွင့်အရေးပေးမယ်လို့မင်းမထင်ဘူး။
မတ်လ 11, 2008 မှာ 12: 35 pm တွင်
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့မင်းရဲ့ရှုမြင်ပုံကိုငါမြင်တယ်။ ရှေ့ကိုတည်ဆောက်ရတာပိုခက်မယ်၊ ရေရှည်မှာပိုကောင်းတဲ့ငွေကိုပေးလိမ့်မယ်။ (တကယ်ကိုဘာမှလို)
မတ်လ 13, 2008 မှာ 4: 01 AM
All SEO One Pack အတွက်သတိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မိတ္တူများကိုခေါင်းအောက်ရှိခေါင်းစဉ်ပုဒ်မအောက်ရှိခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရေးသည်ဟုထင်ပါသလား။
မတ်လ 13, 2008 မှာ 10: 18 AM
မတ်လ 13, 2008 မှာ 10: 25 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! 🙂
မင်းနဲ့အတူအားလုံးမျှော်လင့်ပါတယ် ငါသည်သင်တို့ကိုတစ် ဦး အနေဖြင့်အဘို့အခဏတာဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပြီးပြီကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်သောရှာတွေ့, ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မတ်လ 13, 2008 မှာ 1: 54 pm တွင်
ကြင်နာတတ်တဲ့စကားတွေ၊ ငါမကြာသေးခင်ကအလုပ်များနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီလိုတုံ့ပြန်ချက်ကစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်။
မေလ 2, 2008 မှာ 10: 10 pm တွင်
ကျွန်တော်အကြွေးတင်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့် Seesmic plugin ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုတွေကိုပြသဖို့ Sidebar plugin တစ်ခုပါ။ ငါသဘောတူသည် - Seesmic comments plugin ကိုဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲ။
စက်တင်ဘာ 30, 2010 မှာ 10: 17 AM
ငါ blogging နှင့်အတော်လေးအသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီး ALL IN ONE တွင်ထည့်သွင်းထားသည့် Suffusion ဟုခေါ်သော self-hosted WordPress အခင်းအကျင်းသို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ကောင်းပါတယ်